Okraina: Roa Taonan’ny Fitondran’i Yushchenko · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Septambra 2017 16:40 GMT
Roa taona lasa izay, anisan'ireo an-hetsiny tonga teny amin'ny Kianjan'ny Fahaleovantenan'i Kyev (Maidan Nezalezhnosti), ny 23 Janoary, i Dan sy Lesya McMinn avy ao amin'ny Orange Ukraine, mba hihaino ny kabary fitokanana nataon'i Victor Yushchenko. Tahaka ireo maro hafa, tsy maintsy nisedra sakana vitsivitsy izy ireo mba hahazo topimaso ny hetsika. Naka sary ireo vahoaka maro izy ireo ary nanoratra izao tany anatin'ireo zana-dohateny, ankoatra ireo zavatra hafa, :
[…] Tsy maintsy nandeha tamin'izay làlana rehetra mihodidina izahay mba hahatazana satria tena feno olona maro be ka tsy afaka nanakaiky tsara mba hahita rehefa nandeha tamin'ny lalam-be.
[…] nisy fotoana izahay niakatra tamin'io fiakarana kely mangatsiaka be io eo amin'ireo toerana simba be. Inona moa ny aina sy ny tena amin'ny fotoan-dehibe tahàka izao anatin'ny tantara?
[…] Ny tena nahazendana dia nirenireny tany amin'ireo lalàna mifanohitra amin'ny aleha ny ankamaroanay vahoaka rehetra, voabahan'ny fitohanan'ny olona mandeha an-tongotra tamin'ireo sisiny maro. Ny fandehanan'ireo olona maro be amin'ny sisin-dàlana dia ahafahanao mihevitra ny habetsaky ny olona teny an-dàlana.
Tena tsy nisy niraharaha mihitsy ny tsingerintaona faharoan'ny lanonam-pitokanan'i Victor Yushchenko tamin'ny Talata lasa teo, takona tanteraka tao ambadiky ny ady fahefana marikivy ary ny fiangonan'ny hadisoam-panantenana amin'ny “fitondràna tsy nahombin'i” Yushchenko, araka ny nantsoin'i Abdymok, mpanao gazety sady mpitoraka blaogy mipetraka any Kyev, ao anatinà lahatsoratra fohy milaza ilay tsingerintaona.
Raha iverenana ny volana Aogositra 2006, ny mpampiasa LJ, didaio, dia nanipika ny fironana vaovaon'ny tontolon'ny bilaogy Okraniana hijery an'i Yushchenko tsy toy ny “maherifo”-ny fanjakana fa toy ny “mpanohitra ny maherifo”-ny – ary ny 23 Janoary, anisan'ireo Okraniana mpitoraka blaogy azo isaina amin'ny rantsan-tànana izay leo ny nieritreritra (UKR) momba ny tsingerintaonan'ny tsy nahavitan'i Yushchenko nanatanteraka izay nandrandraina:
Roa taona lasa izay, nitsangana teo amin'ny Maidan Nezalezhnosti aho, niakanjo aron'orana volomboasary, miaraka taminà lamba fiambozona niloko volomboasary nandrakotra ahy, feno rehareha sy hafaliana noho ireo zava-nitranga vao haingana. Teo anilako, Okraniana an-hetsiny no nanana fihetsehampo toy izany. Tamin'izany fotoana izany, nandritra ny lanonana fanokanana ny Filohan'ny vahoaka, samy nanantena fiainana vaovao tao Okraina ny tsirairay tamintsika, fenitra fiainana vaovao ary zavatra maro hafa.
Ankehitriny, tsy tia hamakafaka ny zavatra rehetra nitranga tao anatin'ireo roa taona lasa aho – ankehitriny, ho feno lahatsoratra maro mikasika izany. Fanampin'izany, hanery azy handany fotoana betsaka hiezahana hanala ny anarany hoe ilay adalan'ny vahoaka Okraniana rehetra ireo hetsiky ny Filoham-bahoaka mikasika ny volavolan-dalàna mikasika ny Kabinetran'ny Minisitra [izay mety hanena ny fahefàny].
Noho izany, tiako ny hasongadina ny fitondrantenan'ireo izay nitsangana teo anilako tany Maidan ny 24 Janoary [sic], 2005.
Ny herinandro lasa teo, henoko in-droa ireto teny ireto – avy tamin'ireo olona akaikiko sy ireo olom-pantatro: “Ary firifiry moa ny fanantenana nisy…” Taminà tranga iray, nolazainà vehivavy nifidy [ ho an'ny praiminisitra Victor Yanukovych] sy ny Antokon'ny Faritra-ny io, izay nanohana [ny filoha faharoan'i Okraina, Leonid Kuchma] ary niasa tao amin'ny andrim-panjakanan'ny governemanta nandritra ny andro rehetra niainany. Ary tamin'ny tranga iray hafa, notenenin'ny tovolahy iray io , izay nifidy an'i Yushchenko, ary mpanohana mahafatrapo ny Revolisiôna Volomboasary, saingy avy eo, tamin'ny fifidianana ny lohataona 2006, niaraka tamin'ny [mpanohitra an'i Yushchenko Ne Tak!] izy, nanohana navitrika sy nanindrahindra mafy ireo heviny. Ireo olona roa tena samihafa tanteraka ireo, tao anelanelan'ny andro vitsy, samy niteny zavatra mitovy: “Ary firifiry moa ny fanantenana nisy…”
Hita fa ireo olona izay namadika na tsy mbola nanohana an'i Yushchenko mihitsy dia samy niandry zavatra avy taminy daholo, ary amin'izao fotoana izao, manome tsiny azy ho namadika ireo fanantenan'izy ireo. Tsy misy ilàna ny hanehoana hevitra amin'io…
Raha fintinina izay rehetra izay, tiako hasongadina fa tsy Yushchenko no maty antoka tamin'ny Revolisiôna Volomboasary, ary tsy olon-kafa, fa isika rehetra mihitsy – ireo izay nanala an'i Kuchma ary nitondra an'i Yushchenko teo amin'ny fitondrana. Resy isika rehefa nifantoka tamin'ireo raharahantsika manokana, tamin'ny fiheverana fa efa azo ny revolisiôna. Resy isika rehefa nibanjina tsy nanana faharetana ireo fanohanana 60 isan-jato an'i Yushchenko/[praiminisitra teo aloha Yulia Tymoshenko] ary nisafidy ny tsy hiraharaha ireo olana tsy nitsahatra. Ary ho resy ihany koa isika izao, rehefa miafina ao ambadik'ireo raharahantsika manokana sy miezaka [hanalavitra ny resaka politika].
Efa nanoratra imbetsaka ireo teny ireo tao amin'ny LJ-ako aho. Ary mbola hamerina azy ireo indray […] mba hahatonga ireo Okrainiana hahazo tsara fotsiny: tomponandraikitra tsy amin'ny fiainantsika fotsiny isika, fa amin'ny fiainan'ny Tanindrazantsika ihany koa; miankina amintsika ny zavatra rehetra.